Global Voices teny Malagasy » Fitaovana Fikajiana Mesoamerican : Taolana Ho An’ireo Kajy Maoderina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Oktobra 2015 6:50 GMT 1	 · Mpanoratra Gabriela Garcia Calderon Orbe Nandika (en) i Gabriela García Calderón, Sylvia Aimée
Sokajy: Amerika Latina, Meksika, Fanabeazana, Mediam-bahoaka, Tantara, Teratany
Fitaovana fikajiana Mesoamerican. Pikantsary tamin'ny lahatsary  nalefa tamin'ny YouTube.
Fitaovana iray fikajiana nampiasaina tao amin'ireo kolontsaina Mesoamerican Espaniôla taloha ny nepohualtzintzin , tafiditra ao anatin'izany ireo Mayana, izay ankehitriny miverina any anaty fandaharam-pianarana maro, izay mampiasa io fitaovana mahery vaika io mba hampianarana matematika dieny mbola kely amin'ny fomba voajanahary tanteraka.
Ny anarana nepohualtzintzin  dia noforonina avy amin'ny teny roa tao amin'ny teny Mesoamerican Nahuatl : nepohual, izay midika ho “fanisàna”, ary tzintzin, izay midika ho “mendri-kaja na maharaka ny toetrandro”. Noho izany, ny teny hoe nepohualtzintzin dia midika “Ny fanisàna maharaka ny toetrandro.”
Nifototra tamin'ny isa 20 ny rafi-marikan'i Mayan, tsy toy ny fomba fanisàna ampiasaina ankehitriny mihintsy. Ahitàna ny isa aotra io fomba fanisàna mifototra amin'ny isa roapolo io :
.Noho ny habetsahan'ireo kajy azo atao aminy, azo oharina amin'ny solosaina maoderina  ny nepohualtzintzin. Fitambaran'ireo vakana 91 voatsinjara ho tsanganana 13, misy vakana fito izy io. Ny isa iraika amby sivifolo dia ampahaefatry ny 364, mikasika ny isan'ny andro anatin'ny taona iray, ka ny isan'ireo vakana rehetra dia maneho vanintaona iray. Ny 91 indroa dia 182, tsingerim-potoanan'ny katsaka:
Tsara ny manamarika fa ny sivilizasiona Mayan no voalohany  tao Amerika nanehoana ny isa aotra :
Ity tranonkala  ity dia manolotra torolalana fampianarana ny fomba fampiasàna ny nepohualtzintzin. Ao anatin'ny lahatsary eto ambany, asehon'ny profesora Everardo Lara González ny fomba fanaovana kajy matematika amin'ny nepo:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/10/16/74057/
 fomba fanisàna mifototra amin'ny isa roapolo io: http://www.geocities.ws/abacosoroban/nepohualtzintzin.html
 solosaina maoderina: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://nuevoleon.inea.gob.mx/MEVyT/Disco1/cursos/numyc/interface/main/recursos/revista/revista5.htm
 no voalohany: https://es.wikipedia.org/wiki/Numeraci%C3%B3n_maya
 ny isa aotra: http://oncetv-ipn.net/sacbe/mundo/los_mayas_y_los_numeros/cero.html
 nanjary nampiasaina : https://www.facebook.com/pages/NEPOHUALTZINTZIN-UNA-ALTERNATIVA-EN-EL-APRENDIZAJE-DE-LAS-MATEMATICAS/220443387987571?sk=info&tab=page_info